သူရဲကောင်းမှတ်တမ်း… – PVTV Myanmar
BBC News ၏ The Happy-go-lucky Man Training AsaGoldsmith ကို ခံစားတင်ပြသည်။
Like – 10K Share – 1010
2021-04-19 at 8:13 PM
Karen Saw Benjamin says:
2021-04-19 at 8:31 PM
Could you please make with English subtitle as well?
The other country can watch it and understand what we Myanmar people facing
2021-04-19 at 8:57 PM
Need to support all fallen heroes families and detainees since 1988.
2021-04-19 at 8:58 PM
သားလေးရေ ကောင်းရာဘုံဘဝ မှာ အေးချမ်းပါစေ။
2021-04-19 at 9:00 PM
Subtitles လုပ်ပါဟ 🙃
2021-04-19 at 9:55 PM
အရေးတော်ပုံ အောင်ရမည် အောင်ကို အောင်ရမည်။
2021-04-19 at 11:57 PM
Phøø Wai says:
NUG ကအဆင့်ဆင့်လုပ်ဆောင်ရမှာသိပါတယ် ဒါပေမယ့် ဒီလိုတွေမြင်တဲ့အခါ ဖြစ်နိုင်ကင် မြန်”ပြီးအောင်ကူညီပေးပါနော် 😢😢🙏🙏🙏
Phyo Min Khaing says:
2021-04-20 at 12:14 AM
အလေးအနက် ဦးညွှတ် ပါတယ်။
2021-04-20 at 1:28 AM
SaiTailon Narhai says:
2021-04-20 at 2:31 AM
2021-04-20 at 4:32 AM
Renes Mee says:
2021-04-20 at 7:20 AM
အသုံးအနှုန်း အခေါ်အဝေါ်တေ ကြိုက်တယ်👍🏻
2021-04-20 at 7:32 AM
ဂျန်ဇီတွေရဲ့ အနာဂတ် ဘဝခရီးသည် လူလိမ်မာလေးတွေဖြစ်ဖို့လည်း Public Voice Television အများကြီး အထောက်အကူဖြစ်ပါသည်
Rose Canaan says:
2021-04-20 at 7:58 AM
အာဏာရှင် စနစ် မုချ ကျဆုံးရမည်။
Soe Than Oo says:
2021-04-20 at 8:45 AM
Htet Nyi Lin says:
2021-04-20 at 9:33 AM
ဒီလိုသားကောင်းရတနာလေးတွေကို သတ်ရက်တဲ့ခွေးသူတောင်းစားတွေကတော့ဝဍ်ဆိုတာလည်းဘာမှန်းသိပုံမပေါ်ဘူး ဘာသာမဲ့တွေအလားရက်စက်ယုတ်မာလွန်းလို့ တွေ့ရာသင်းချိုင်းဓားမဆိုင်းပဲသတ်ချင်နေမိတယ် လက်နက်အင်အားမမျှတော့ရင်နာနာနဲ့အားလံုးငြိမ်နေကြရတာ
Sanmin Oo says:
2021-04-20 at 10:19 AM
R.I.P. our hero.
2021-04-20 at 1:22 PM
Nan Khaing says:
2021-04-20 at 1:46 PM
Win Thi says:
2021-04-20 at 3:57 PM
Ayeaye Than says:
2021-04-20 at 6:38 PM
Aye May says:
2021-04-20 at 7:05 PM
Win Mariyam says:
2021-04-21 at 12:33 AM
Mohammad Javir says:
2021-04-22 at 3:39 AM
2021-04-22 at 10:29 AM
လေးစား စွာ ဦးညွတ် ပါသည်
နတ် သျှင် နောင် says:
2021-04-22 at 10:45 AM
Wailin Aung says:
2021-04-22 at 4:07 PM
ယု မေ says:
2021-04-24 at 9:56 AM
ယနေ့ည ပြည်တွင်းသတင်း (၁၉-၄-၂၁)…